Ongororo ye "Pedro uye kaputeni" | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Vanyori, Theater
Vachangofa ava Mario Benedetti Akatisiira pakati pemazita ake mazhinji kabhuku kadiki kainzi "Peter naKaputeni", inova yemitambo yemitambo kunyangwe hazvo, sekubvuma kwakaita munyori, haana kuzvarwa aine pfungwa yekumirirwa.
Maari mutambudzi uye anotambudzwa Vane musangano wekutarisana-neuso unogara kwenguva dzinoverengeka umo mutambudzi ane basa rekuita kuti vanotambudzwa vataure uye vekupedzisira kuti vanyarare kuitira kuti vasatengesa vamwe vake. Daro remafungiro rinopatsanura mavara ese uye kunyangwe hazvo Kaputeni aine ruoko rwepamusoro, matafura anotenderera nyaya yese.
Uye ndizvo izvozvo Pedro, anotambudzwa, anonzwisisa (kana kuzviita kuti anzwisise) kuti muchokwadi akatofa, kuti hapana chimwe cheichi chaicho, kuti hazvisi kuitika, kuti haana chaanorasikirwa uye kuti marwadzo mamiriro epfungwa kuti vakafa ivo usatambure kuitira kuti neimwe nzira iye asabatwe netambo yehutsinye inoitwa nemutambudzi pamwe chete naye.
Zvakare, sekunge izvo zvaive zvisina kukwana ... anofunga kutambudza mutambudzi wake nekukwesha kuramba kwake uye kutamba naye kubata mabhatani kwepfungwa kuti hapana munhu akange ambobata ...
Ini pachangu, nderimwe remabhuku andinofarira uye ndinofunga chingave chiri kubudirira dai raive rimwe remabasa ekuverenga ekumanikidza muzvikoro zvepamusoro ... zvakawanda zvekudzidza Mumitsara yaMario mukuru, ngaazorore murunyararo, kwaari ndinotenda zvikuru rimwe nerimwe remazwi aakatisiira senhaka mubasa rake rakakura uye rakajeka.
1 Pfupiso yaPeter naCaptain
1.1 Chikamu chekutanga
1.2 Chikamu chechipiri chaPeter naCaptain
1.3 Chikamu chechitatu
1.4 Chikamu chechina uye chekupedzisira chaPeter naCaptain
2 Mavara aPeter nemutungamiriri
Pfupiso yaPeter naCaptain
Basa raPedro uye kaputeni rinogona kukamurwa muzvikamu zvina zvakanyatsosiyaniswa, umo zviitiko zvinowedzera musimba nechinangwa chekuti pane crescendo iri mubasa. Ndokunge, zvinotsvaga izvo muverengi achaona shanduko yemamiriro acho uye kuti inowedzera sei kuva nenjodzi, inonakidza. Nenzira iyi, Mario Benedetti anoteya muverengi mumutambo waanoda kutamba.
Izvo zvikamu zvaPeter nemutungamiriri ndizvo:
Muchikamu chekutanga ichi uchasangana ne protagonist, Pedro anoendeswa kuimba yekubvunzurudza. Ikoko unomuwana akaiswa hood uye akasungwa zvekuti haakwanise kutiza kana kuona chero chinhu kusvikira mumwe murume apinda mumba, anonzi Kaputeni.
Basa reizvi ndere kumubvunzurudza uye kuwana ruzivo rwaanoda. Iye anozivisa Pedro kuti izvo zvaitika kwaari, chidzidzo chaakagamuchira, chaingova chinhu chakareruka uye chakapfava kana ichienzaniswa nezvingave zvakamumirira kana akasabatana., kuve nekutambudzika kwakanyanya uye chirango. Chinhu chisina anokwanisa kutakura.
Zvakare, inokuyambira kuti munhu wese anotaura neimwe nzira.
Kaputeni anoedza kumuita kuti ashandire pamwe zvachose, achifumura zvese zvinogona kuitika kwaari kana akasadaro, pamwe nekumuita kuti anzwisise kuti iye munhu anowana zvese zvaanoda. Uye kuti anoyemura divi raPedro, sekuziva kwake vanovayemura. Icho chimiro che wana chivimbo cheumwe.
Nekudaro, iye zvakare anomutyisidzira, kwete chete nekuda kwake, asiwo nekuda kwemukadzi wake. Mukutsinhana nekusatsungirira kurwadziwa kana kuisa panjodzi pane izvo zvaanoda zvakanyanya, pamwe nekubuda pasina vamwe vake vachiziva kuti akabatana, anofanira kuburitsa mazita mana.
Asi hapana chaanotaura, zvine hushamwari kana nzira inotyisidzira, anoshandira kaputeni, nekuti Pedro mbeveve uye haapindure kune kumwe kufunga.
Chikamu chechipiri chaPeter naCaptain
Chikamu chechipiri chemutambo chinopa Pedro zvakare, nekurohwa kwakawanda uye kushungurudzwa kwakagamuchirwa. Kune kaputeni, uyo anoedza kuwirirana nemusungwa uye kupindura zvaanoda kuziva. Nekudaro, anobvisa hood, chimwe chinhu icho, muchikamu chekutanga, chinogara chiripo.
Ndiyo nguva iyoyo apo Pedro paanotaura, kwaanomuudza kuti anga asati azviita nekuti zvaitaridza kwaari kuti chaive chinhu chisina kukodzera kupindura nehodhi. Nekudaro, kure nekutyisidzirwa, iko zvino Pedro uyo anobvunza Kaputeni mibvunzo nezvemhuri yake, iyo yaanotora sekutyisidzira. Achiona maitiro, Pedro anobvunza zvakare kuti zvinonzwa sei kudzokera kumba mushure mekuuraya vamwe varume. Izvi zvinoita kuti atsamwe uye agume achimurova, kunyangwe, naPedro, aida kunyepedzera kuva "mumwe wevakanaka vakomana."
Mushure memaminetsi mashoma kudzikama, kaputeni anonzwira tsitsi Pedro, achibvuma kuti anonzwa kushushikana mushure mezvaanoita, uye achitarisira kuti uyo akamurwisa anopedzisira azvipira pamberi pekutambudzwa nekurangwa kuve kunosuwisa, chirevo chakajeka kukumbira Pedro kuti arege kuramba kwake.
Mushure mekunyarara, mhinduro yaPedro inogumisa chikamu ichi.
Inokuzivisa iwe kune Akaputirwa Kaputeni, mbatya dzake dzakaunyana, tai yake isina bhatani. Kumbira parunhare kuti udzore Pedro, uyo anoratidzika kunge akaonda uye aine maronda eropa pazvipfeko zvake.
Achimutenda kuti afa, Kaputeni anosvika paari ndokumuisa pachigaro. Ndiyo nguva iyoyo apo Pedro anobvaruka nekuseka, achirangarira kuti husiku ihwohwo, apo aishungurudzwa pamushonga, mwenje wakadzima uye vakatadza kumumisa.
Mukuedza kumudzosa kuchokwadi, Kaputeni anosheedza Pedro nezita rake, kwaanopindura kuti haasi, asi kuti zita rake ndiRomulus (ndiro zita rake). Uye afawo. Unogona kuona iyo kuyedza neiye akabatwa kuyedza kupukunyuka kubva mumamiriro ezvinhu, zvekufunga kuti akatofa uye kuti kurwadziwa kwese kwaanonzwa kuri mukufunga kwake chete, asi kuti hakusi kwechokwadi.
Mushure mekukakavadzana naKaputeni, uko kufa uye kupenga zvinounza mhirizhonga pakati pavo, Kaputeni anopererwa uye anofunga kuti hapana chaachawana kubva maari.
Ndipo panoshanduka mabasa. Pedro anotanga kutaura naKaputeni, iye achizotanga kutaura naye neruremekedzo rukuru. Kaputeni anomuzarurira, achitaura nezvemukadzi wake, kuti akazoguma ashande semutambudzi uye kuti zvakakanganisa sei hupenyu hwake.
Asi ndiPedro anodzokorora kuti afa uye hapana chaanogona kumuudza.
Chikamu chechina uye chekupedzisira chaPeter naCaptain
Pedro akarohwa uye anenge achifa anotaridzika pasi. Uye anodikitira Kaputeni, hapana tai, bhachi uye anotya zvikuru.
Anopupurira nhaurirano kubva kuna Pedro uyo, achifarira, anofunga kuti ari kutaura naAurora, kunyangwe ari ega. Ndiyo panguva iyoyo apo kaputeni anonzwisisa kukuvadza kwose kwaanoita nekushungurudza vanhu uye anokumbira zita, chero zita, kuyedza kumuponesa, asi panguva imwechete kuzviponesa. Nekudaro, Pedro anoramba kuzviita, uye vese vakatongerwa mabasa avo.
Mavara aPeter nemutungamiriri
Mutambo chete unosanganisira mavara maviri: Pedro naKaputeni. Icho chiri nezve maviri anopokana manhamba ayo anochengetedza kukakavara mukati meyese nyaya, asi zvakare vanochinja mafungiro avo, vari kuvhurika zvishoma nezvishoma.
Kune rimwe divi, iwe unayo Pedro, musungwa anoita kunge anogamuchira kurangwa kwake asina kukumbira tsitsi kana kukumbira hupenyu hwake. Iye anotenda mune zvakanaka zvake uye anoda kuzvidzivirira kunyangwe nehupenyu hwake. Nechikonzero ichi, panguva yakatarwa anotarisa kuti atofa, uye kuti zvese zvinoitika kwaari mugumo wepfungwa dzake chete.
Kune rimwe divi, kune Kaputeni, mumwe wevatambi anochinja zvakanyanya mukutamba. Zvinotanga semunhu ane masimba anotsvaga kudyidzana neumwe munhu nekufumura zvese zvichaitika kwaari kana akasabatana, asi panguva imwecheteyo achiedza "kushamwaridzana" naye kuti adaro.
Nekudaro, sekuchinja kuri kuita nyaya, hunhu hunodarowo, tichiziva kuti haifarire basa rayo, kurondedzera zvikamu zvehupenyu hwayo zvinomuita munhu mukutarisana nekutambudzwa kwaari kuitirwa kune imwe. Nekudaro anotsvaga kururamiswa kwezvaanoita. Dambudziko nderekuti Pedro haazvigamuchire, haamunzwiri tsitsi, izvo zvinotsamwisa Kaputeni nekuti, kunyangwe achireurura, haaite kuti mumwe aite zvaari kuda chaizvo, kureurura.
Nenzira iyi, shanduko yevatambi inoonekwa. Kune rimwe divi, iro raPedro, uyo ari kuzvisiya achipenga uye nerufu achiziva kuti haasi kuzobuda imomo uye zvirinani haazotaura chero chinhu. Kune rimwe divi, iro raCaptain, uyo ari pabasa anoramba asingazive zvichaitika mune rake ramangwana.
Unoda kuverenga here? Zvitenge pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » "Peter naCaptain" rimwe remabhuku akanakisa akambonyorwa